Gufgaf|Online राजेश हमालको बच्चा कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न धरै आउछ—हरिहर
राजेश हमालको बच्चा कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न धरै आउछ—हरिहर
गफगाफ- ज्योतिषबाट परिचय कमाएका हरिहर अधिकारीले सिनेमा शुभलभ सँगै अभिनय यात्रा शुरु गरेका छन् । अधिकारी अभिनित सिनेमा चैत १५ गते शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको छ । यसै सिनेमा बाट नव अभिनेत्री क्रिष्टिन पौडेलले पनि सिनेमा नगरीमा डेव्यु गरेकी छन् । ज्योतिष र माँयाप्रेम को कथामा बनेको सिनेमाको ब्यापार औसत छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर हामीले हरिहर अधिकारी सँग रमाइलो गफगाफ गरेका छौ
तपाईले क्रिश्टिनलाई गर्ने माया कस्तो किसिमको माया हो ?
यो सिनेमामा गर्ने माया हो ।
सिनेमा गर्दा गर्दै माया प्रेम आफै बस्छ होला ?
सिनेमामा काम गर्दा माया प्रेम बस्छ होला । तर हाम्रो चाहिँ बसेको छैन (हासोँ)
राजेश हमालको विवाह तपाईले गर्दा भयो भन्ने सनसनी खबर आयो अब केही छ त्यस्तो सनसनी खबर ?
(हासोँ) अहिले त त्यस्तो केही छैन । तर राजेश हमालको बच्चा कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ धेरै । यो प्रश्नमा म उहाँहरुले जहिले बच्चाको बारेमा सोच राख्नुहुन्छ त्यहीले भन्दिछु । यत्ति हो वहाँले चाहनु भयो भने मैले बच्चा जन्माउने राम्रो समय भने बताउन सक्छु ।
क्रिश्टिनको चाहि अहिलेसम्म के के हेरी दिनुभयो ?
उसको विवाह कहिले हुन्छ भनेर हेरिदिएको छु । (हासोँ) उसको विवाह चार पाँच वर्ष पछि हुन्छ ।
क्रिश्टिनको चलचित्र क्षेत्रमा भविष्य कस्तो छ ?
त्यो पनि राम्रो छ । चलचित्रमा लाग्नुप¥यो राम्रो हुन्छ । पढाई अहिलेको समयमा ठिकठाक छ । पढाई सिध्याउनु भयो भने अझै राम्रो हन्छ ।
तपाईलाई चलचित्रमा आफ्नो मुुुख हेर्न मन लागेन भन्ने सुनेको थिएँ किन ?
हो (हासोँ) खै मलाई आफुलाई ठुलो पर्दामा हेर्न बितिक्कै कस्तो अनौठो लाग्यो । अलि कालो बनाई दिएछ तराई तिरको जस्तो (लामो हासोँ) तर राम्रै हो उताको मान्छेहरुले पनि मलाई निकै माया गर्नुहुन्छ । अरु चिज ठिकै लाग्यो ।
नृत्य गर्दा कस्तो लाग्यो ?
रमाईलो महसुस भयो । मैले नाचिरहेको समयमा एक जनाले मलाई आश्चर्य भएर ओहो ! गुरु त नाच्न लाग्नु भएछ भन्नुभएको थियो । अनि चिना हर्नै प¥यो हतार छ भन्नुभयो । पछि हामी बसेको होटेलमा बसेर हेरेको थिएँ ।
चिना हेर्न काम सजिलो कि नृत्य गर्न ?
दुवै गाह्रो हुने रहेछ । चिना हेर्दा मान्छेको जिवनको बारेमा हेर्न प¥यो । केही गलत भयो भने उहाँहरुले त्यही पालना गर्नुहुन्छ । अनि नृत्यमा पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ समय पनि धेरै लाग्दो रहेछ ।